Xalayaa Banaa Waldaya Qorannoolee Oromoo (OSA) – Welcome to bilisummaa
Xalayaa Banaa Waldaya Qorannoolee Oromoo (OSA)
Xalayaa banaa kana afaanuma keenyaan OSAf akkan barreessu waan na dirqetu jira. Hayyonni seenaa dhalootaan Oromoos tahee Oromoo irraa ala tahan,waa’ee seenaa Oromoo Bardhibbee 16ffaa, (gariin Oromo migration jedhu, gariinis Oromo expansion jedhu, ani garuu Return of the Oromojechuun filadha) irratti falmii hunde-jabeessa yoo geggeessan dilas hin dhagahu, hin dubbisu. Rakkoo kana wanni maddisiise maal akka tahe ifaa dha. Oromoon akka Oromootti seenaa mataa ofii barreeffamaan galmeeffatee ol kaa’uu hanqachuun isa guddaa dha. Oromoon waan argaa-dhageettiidhaan (afoolaan) hangafoota isaa irraa dhagahu dhala dhala isaatti dabarsaa dhufe malee, sirna barreeffamaa mataa isaa qabaatee ittiin hin galmeeffanne. Oromoon sirna barreeffama mataa isaa dhabeef garuu qaroomina dur-durii (ancient civilization) hin qabu jechuu miti. Qaroomina sirna barreeffama mataa keenyaa dhabneef qofa mataan waan gad nu cabuuf hin qabu. Qaroomina laalcha polotikaa, aadaa, amanatii, safuu, urjii dhahaa fi kan kana fakkaataniin saboota ollaa keenyaa kamuu keessaa hangafummaan laalamuu dandeenya. Hundumtuu hafee, warra Gadaan bulu tahuun keenya qofti mootii qaroomtotaa nu godhuu danda’a.
Previous OPDO Elects Muktar Kedir as its president
Next Resilient Ethiopian Muslims’ Movement is back